Archive du 20190206
Alain Ramaroson sy Pety Rakotoniaina Adino tanteraka any am-ponja !
Adino tanteraka any m-ponja i Alain Ramaroson sy Pety Rakotoniaina, mpanao politika anisan’ny hita matetika tamin’ny raharaham-pirenena. Nanomboka ny volana aogositra 2016 i Alain Ramaroson no naiditra am-ponja noho ny raharahan-tany nampifanolana azy sy ny fianakaviany.
Rivo Rakotovao Misy mikasa hanongana ?
Miahiahy amin’ny hoaviny ireo loholona raha nikasa hanongana ny filohan`ny Antenimierandoholona sy ny birao maharitra omaly hariva.
Krizy tampoka mahazo ny firenena Fanina tanteraka ny fitondrana
Nafampana ny raharaham-pirenena nialoha ny nilazan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny 8 janoary fa i Andry Rajoelina no lany ho filoham-pirenena.
Fahefana nomena ny filoham-pirenena Tsy tokony hajanona ela, hoy ny mpitsara iraisampirenena
Tsy ara-dalàna ary mifanohitra amin’ny lalàmpanorenana raha io fahefany io no hametrahany governora, hoy ny mpitsara iraisampirenena, Arlette Ramaroson, raha nanontaniana ny heviny mikasika ny fahefana nomena ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, izay sady ho mpanao lalàna no mpanatanteraka.
Fahatsiarovana ratsy tamin’ny naha depiote Ny voina nanjo ny mpiara-mitolona, hoy ny depiote Rasoanoromalala
Amin’ny maha solombavambahoaka ny tena, hoy ny depiote voafidy tao amin’ny boriborintany faha-6, Horace Rasoanoromalala, dia saika isan’andro nandray fitarainana avy amin’ny vahoaka tao an-tokantrano foana tao anatin’izay 5 taona izay.
Fitondrana Rajoelina Mila tairina vao mihetsika
Tsy fahamatorana ve sa mbola variana amin’ny zavatra hafa ? Hita ho miandry tairina foana tato ho ato ny fitondrana Rajoelina vao mandray fepetra.
Olon’ny HVM Manahy mafy ny valifaty politika…
Mihorohoro ireo mpanao afera manana dosie nandritra ny fitondrana HVM fa dia ho avy amin’ny angady sy ny harona ny fitondrana IEM. Nisantatra izany i Hugues Ratsiferana izay nampidirina am-ponja vonjimaika any Antanimora.
Politika ankapoben’ny fanjakana Tsy azo ihodivirana ny fitrosana
Tsy azo avela ireo mpamatsy vola mahazatra, hoy ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony ampitain-davitra CNTEMAD (Centre National de Télé-Enseignement de MADagascar) Dokotera Djohary Andrianambinina.
Vita iny ny dimy taona Ahoana ny hevitr’ireo depiote
Tapitra omaly talata 5 febroary ny fotoam-piasan’ireo depiote 151 niasa nandritra ny 5 taona. Maro ny fanehoan-kevitra ary saika niraisan’izy ireo ny ezaka tsy maintsy ho tohizana sy ny korontana niainana teny amin’ny antenimieram-pirenena.
Taratasin’i Jean Izay ve no lasopiny ?
Eny ary ry Jean ! Tsy hitako izay holazaina anao na veloma na hoe mandrapihaona aloha amin’izao fa dia arahabaina aloha fa nahavita fotoam-piasana.
Fiarahamonim-pirenena malagasy 4,4 no naoty azony
Notanterahina omaly tetsy amin’ny Le Pave Antaninarenina ny tatitra vokatry ny fanadihadiana natao momba ny tomban’ezak’ireo fiarahamonim-pirenena Malagasy tao anatin’ny 3 taona.
Fikambanana Planet Renew Hanohitra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena
Manoloana ny famarotana ireo toerana misy harena ankibon’ny tany nataon’ny filoha nifandimby teto amin’ny firenentsika dia mijoro soa aman-tsara ny fikambanana « Planet Renew »,
Fahafatesana mpivady teo ampamarinana “Tsy nandray an-tanana ny fandevenana tanteraka ny Fitondrana”
“Malahelo mihitsy izahay fianakaviana fa lasa fampanantenana poak’aty ny filazana tamin’ny haino aman-jery fa horaisin’ny fanjakana an-tanana ny fandevenana ireo tra-doza.”
Ady amin’ny kolikoly Hihamafy ny ezaka ataon’ny Zandarimariam-pirenena
1223. Io no isan’ny fanambaram-pananana nentin’ny delegasion’ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, Komandin’ny Zandarimariam-pirenena na ZP izay notronin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky sy ireo
« Athletisme pour tous » Tontosa ny « course eau vive » andiany faha-6
Olona 650 isa no niatrika an’ilay hetsika « Athletisme pour tous » andiany faha-6 nokarakarain’ny FMA « Federasion’ny Athletisme Malagasy » niarahany nanatontosa tamin’ny Eau vive ary nahazo tohana mavitrika tamin’ny orinasa Telma tamin’ny alahady 03 febroary teo.
Rugby « Tournoi des Six Nations 2019 » Novana ho « Guinness Six Nations » indray
Lalao rugby à XV malaza any ivelany tontosaina isaky ny volana febroary sy martsa isan-taona ka handraisan’ny ekipam-pirenena 6 anjara dia Angleterre, Écosse, France, Pays de Galles, Irlande ary Italie anjara ny « Tournoi des Six Nations » izay lasa « Guinness Six Nations » tamin’ity edisiona 2019.
Baolina kitra Analamanga Fantatra ireo hiatrika ny 1/4-dalana
Taorian’ny andro faha-7 notontosaina teny Carion tamin’ny sabotsy 02 sy alahady 03 febroary 2019 dia fantatra avokoa ireo ekipa 8 hiatrika ny lalao 1/4-dalana
Dokotera aorian’ny fahafatesana…
Tsy sanatria fitia te hitsikera be fahatany na hanakiana an-jambany, fa zary dokotera aorian’ny fahafatesana hatrany ny fitondram-panjakana eto amintsika.
MISY MIKASA HANDROBA
Mbola misy mikasa handroba ihany eny Ampamarinana taorian’ireny loza nahafaty olona ireny.
Varotra fiara vaovao sy efa niasa Ny marika koreana no be mpanjifa…
Tsy arakaraka ny filazana fa firenena mahantra indrindra i Madagasikara kanefa mandeha ny varotra fiarakodia eto amintsika na vaovao na koa efa niasa.
Mponin’Ampamarinana Mbola misy tsy manaiky ny handao ny trano fonenany
Tsy maintsy mandao ny trano fonenany manomboka rahampitso alakamisy 07 febroary farafahatarany ireo mponina eny Ampamarinana sy ny manodidina hisorohana ny mety hisian’ny aina hafoy ateraky ny vatobe mianjera indray.